Reinfeldt iyo Löfven oo xaley fooda is-deray - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Reinfeldt iyo Löfven oo xaley fooda is-deray
La daabacay tisdag 17 september 2013 kl 09.45
Xaley markii ugu horeysey waxaa dood toos loo tabinayey iskaga horyimid ra’iisalwasaare Fredrik Reinfeldt iyo hogaamiyaha xisbiga Socialdemokratiga Stefan Löfven. Dooda labada mudane ayaa laga tabiyey barnaamijka warka ee Aktuellt. Ciiwaanka dooda xaley ayaa ku sabsaneyd arimaha suuqa shaqada iyo daryeelka bulshada.
- Kuuma suurto galeyso in aad canshuur dhimis sameysid islamarkaana maalgelin ku sameysid shaqo abuuris, ayuu ka yeri Stefan Löfven doodii xaley ka baxdey SVT- Aktuellt. Waa in aan horey kaga jirno dhaqaalaha caalamiga, taasna waxaa looga marmi karin in shirkada qaaska loo leeyahey ay ka jirto dalab baahi ah in ay shaqaaleeyaan, waxaana lago marmaaan ah in aan heysano shaqaale tacliin leh oo carbiyeysan, ayuu yeri Löfven.
- Waxad ku taliseen canhsuur kordhind han 30 bilyan oo karoon, ayuu Fredrik Reifeldt ku jawaabey. Lagu sii derey waxa ay Vänsterpartiet iyo Miljöpartiet doonayaan in ay sameeyaan. Canshuur kordhintaasna waxaad dooneysiin in aad ku maalgelisaan dhismaha nidaam taakulo iyo kaalmo ku dhisan. Waxaan intaas dheer in aad dooneysiin in meesha ka saartiin xaduudahii aan u sameyney jiro ku qornaanshaha, si aysan dad badan jiro bilash ah iskaga qornaanin. Arimahaas waxey qatar ku yahiin maaliyada qaranka. Waxaad u maleysiin in aad maalkan aad gelin doontiin Iskuulka balse waxaad gelin doontiin dhaqaalaha ku baxi doona jiro ku qornaanshaha. Dhabahasna mahan mid wanaagsan ayuu ku weerarey Reinfeldt.